Farshaxanada laga bilaabo ciyaaro aan lahayn qalin
Dad badan iyo dad badan ayaa bilaabay inay ka qaybqaataan samaynta farshaxanimada ciyaaraha . Waxay helayaan nidaam xasaasi ah oo saacado badan ah oo abuuraya dhismayaal waaweyn iyo kuwo yar oo iyaga ka mid ah. Badanaa, si loo xiro sahayda cuntada, midka ayaa loo isticmaalaa, laakiin qaar ka mid ah xirfadleyda ayaa ogaaday sida loo maareeyo. Isla mar ahaantaana, tiradaasi waxay noqon doontaa mid adag oo aan dib udhicin, haddii la soo qaado.
Maqaalkani, waxaan eegeynaa sida loo sameeyo tirooyinka asaasiga ah ee farshaxanka laga bilaabo ciyaaro aan lahayn isticmaalka koolada.
Master-class # 1: makiinada laga soo bilaabo ciyaaro aan lahayn qalin
kartoon iyo xaashi warqad ah;
qalin, qalinjabiye, hareeraha, taliyaha;
ciddida iyo curiska.
Ugu horreyn waxaan samaynaa qaab-hawleed lagu diyaariyo. Si aad tan u sameyso, sawir wareega leh dhexdhexaad ah oo ah 4.2 cm oo u qeybso tirada qaybaha aan u baahanahay (kiiskeena waa 15 illaa 24 °).
Waxaan ku dhejin karnaa xaashida shaashadda ee kaarar qarxa ah kuna jajaban ilaa 15 godad wareeg ah. Cirifka dhaadheer ee dhumucdiisuna waa inay ahaataa wax yar oo ka badan ciyaarta.
Waxaan isku dhejineynaa boogaha soojeeday ee ciyaarta.
Inta u dhaxaysa ciyaaraha qotoda tooska ah waxay bilaabaan inay soo saaraan hareeraha, meel kasta oo xiga oo ka danbeeya kan danbe.
Si aad u dhameysid taxanaha, waa inaad si tartiib ah u qaaddid ciyaarta ugu horeysa oo aad gelisid, ka dibna ugu dambeyntii. Dhamaadka cayaarta, hubi inaad ka cadaadiso kaararka si aad u sameyso safka xitaa.
Sidoo kale, waxaan sameynaa safka labaad, saddexaad, afraad iyo shanaad.
Dhamee sida isku midka ah ee safka hore: kicinta ugu horeysa, riix ilaa ugu dambeysa, laakiin hal ama ugu dambeyn ciyaarta.
Riix barta gebi ahaanba oo aad bilowdid inaad ka soo bixisid khariidadaha toosan ee kaararka. Waxaa lagama maarmaan ah in arrintan loo sameeyo si waafaqsan qorshahan, haddii kale waa la burburin karaa.
Gawaarida cayaaraha waa diyaar!
Muraayadaha noocan oo kale ah ayaa laga samayn karaa dhexroor kala duwan, beddelaya tirada cayaaraha loo isticmaalo ee saldhig u ah. Tirada yaryar ee ay tiradoodu ka yar tahay, horeyba waxay u noqon doontaa wheel.
Fasalka Master # 2: kubbadda kuleylaha oo aan lahayn qalin
sanduuq ka hooseeya disk;
Waxaan ku dhejin karnaa 2 kulan oo masaafo dheer ah oo kudhisan 2.5 cm, iyaga oo 8da kulan ku ciyaaraya masaafada u dhigma dhumucdooda, ka dibna waxaan ku dhejin karnaa hal dheeri oo isku xigta. Waa mid aad u muhiim ah in hogaamiyayaasha ciyaaraha oo dhan loo isticmaalo hal saf oo dhinac ah hal dhinac.
Waxaan udiyaarineynaa 4 kulan si wacan. Sidaa daraadeed waxaan sameynaa 6 saf oo dheeraad ah.
Marka laga soo tago waxaan ku dhejinay 2 saf oo 8 kulan oo isku dhafan. Waa lagama maarmaan in la ilaaliyo masaafada isku midka ah, sidoo kale waxay la mid tahay dhumucda ciyaarta.
Dhinacyada geesaha waxaan ku dhejin karnaa 4 kulan. Si aad u haysatid booska ka mid ah khadadka soo haray ee safka, waa inaad gelisaa dusha sare oo hoos u riix. Waxaan sidaas ku sameynaa wareegga wareegga ee wareegga kore. Aad bay muhiim u tahay in aad gashato si madaxdu ay u yihiin heer isku mid ah.
Waxaan ka saari karnaa lacagta.
Kuubaanku waa mid xoogan, waa in laga saaraa dhinacyada oo dhan, si ay dhammaan cayaaraha u istaagaan si sax ah oo isku xidhan.
Laga soo bilaabo kaararka waxaan ka jaray wareegga dhexroorka aan u baahanahay. In template soo baxay, gelin cube our.
Waxaan ciyaaraha u gelin doonaa godadka bilaashka ah illaa dhammaadka ilaa dhamaadka wareegga wareega.
Si isku mid ah u sameeya dhammaan dhinacyada kale. Si joogto ah u hubi habka loo qaabeeyo wareegga wareegsan.
Taas ka dib, waxaa lagama maarmaan ah in si fiican loo hubiyo in labada dhinac ee ciyaarta ay yihiin kuwo siman oo adag oo ka dhan ah dhinacyada. Si tartiib ah u tarti kubada si aad u xoojiso.
Gaar kubbada cagta ah oo aan lahayn sonkor ayaa diyaar u ah!
Aqoonsiga sida loo sameeyo tirooyinka asaasiga ah, waxaad ka samayn kartaa shey kasta oo ka mid ah qalabka wax lagu dhejiyo: miro, kaniisad, baabuur iyo kuwo kale.
Martiqaad loogu talagalay Halloween
Qaabka farsamaynta ee bilowga ah
Kharashka qumbaha leh gacmahaaga
Sidee loo xiraa T-shirt?
Sakura laga bilaabo fasalka masters of master
Sidee loo xirxiraa maraqa dariiq?
Maqaaraduhu waxay ka furan yihiin gacmahooda
Skirt-tutu - waxa la xirayo?
Zephyranthes - daryeelka guriga
Duubo yaryar oo loogu talagalay jikada
Rabshadaha guriga - calaamadaha
Ilmaha 1 sano - horumarinta caanaha, qaab maalin, dano gaar ah
Bella Hadid ayaa la kulantay saaxiibtiisii ​​hore ee Kendall Jenner
Taylor Swift ayaa helay $ 1 ka horeeyay DJ hore
Siding hoos geedka
Xoqista jeliska ilkaha
Kate Moss oo qaawan ayaa soo bandhigtay qalab dahab ah ee naqshadeeda
Mashiinka-baakada ee dugsiga
Sidee u hambalyeeysaa hooyada dhalashadeeda?
Evernote - waa maxay barnaamijkan iyo sida loo isticmaalo?
Ma suuragal tahay in timo laga gooyo Saddexmidnimada?
Ku rakibida albaabbo saqafka PVC ah
Bolero oo gabar ah